Events Archive • POINT
MGW Center, No. 170-176, Room no - 409, MGW Center, Bo Aung Kyaw Road, Bo Ta Htaung Township,.
Yangon, yangon 11161 Myanmar
နိုင်ငံတကာနဲ့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ပိုမိုများပြားလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စကားပြန်အခန်းကဏ္ဍက တနေ့တခြား ပိုမို အရေးပါလာပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ ညီလာခံတွေ၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားတွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောဆိုဆက်သွယ်ပေးမယ့် စကားပြန်တွေ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ စကားပြန်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် များပြားနေပေမယ့် အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့စကားပြန်တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်ဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ စကားပြန်တစ်ဦးအတွက် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကား ကောင်းမွန်ရုံသာမက မိခင်ဘာသာစကားကိုလည်း အထူးကျွမ်းကျင်ရန် လိုအပ်လှပါတယ်။ Peak Point Academy ရဲ့ ဇွန်လအတွက် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်မှာတော့ GeekHub MM ၏ Head of Operation ဖြစ်သူ၊ အောင်မြင်တဲ့ စကားပြန်တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ Sayar Theo Maung က သူ၏ စကားပြန်တစ်ဦးအနေနဲ့ အတွေ့အကြုံများကို ဟောပြေဆွေးနွေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြန်ဖြစ်လိုသူတွေအတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ Sayar Theo Maung ကို သိလိုတာတွေ မေးမြန်းခွင့်ရမယ့် Q&A session လည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေ ၃၀ သာ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဒီ Workshop လေးကို…
I Can’t to We Can
အမေရိကန်စင်တာ (American Center),
လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေက ဘာတွေလဲ . . . ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့တာလား၊ မလုပ်ဖြစ်တာလား . . . ကျွန်တော်တို့ Community မှာ ဘယ်လို အပြောင်းလဲတွေ လိုအပ်လဲ . . . အိပ်မက်တွေကို ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်ကြမလဲ. . . ပြောင်းလဲမှုတွေက ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ အရေးပါလှပါတယ် . . . အောင်မြင်တဲ့ ခရီးကို လျှောက်လှမ်းဖို့ သေးငယ်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကနေ စတင်ရပါမယ် . . . စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ပြီး အောင်မြင်စွာ အပြောင်းအလဲတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အတွေ့ကြုံတွေကို မျှဝေပေးမယ့် ဆွေးနွေးပွဲကို… ၃၀. ၆. ၂၀၁၈ (စနေနေ့)၊ ညနေ (၃)နာရီမှ (၅) နာရီအထိ၊ အမေရိကန်စင်တာတွင် ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . . ဒီဟောပြောဆွေးနွေးပွဲမှာ မခင်နှင်းစိုး - Principal at Myanmar Metropolitan College ကိုမြေမှုန်လွင် - Founder at Yangon Book Plaza ဒေါက်တာစွမ်းဆောင်ဦး…
ဘာသာပြန်​ခြင်​းကိုစိတ်​ဝင်​စားပြီး ဘာသာပြန်​လုပ်​ငန်​းနဲ့ အသက်​​မွေးဝမ်​း​ကျောင်​း ပြုလိူသူများအတွက်​ နာမည်​ကြီးဆရာများနှင်​့ တစ်​ဦးချင်​းစီ​ဆွေး​နွေးခွင်​့ရမည်​့ပွဲ​လေးတစ်​ခုကို ဖိတ်​ကြားပါရ​စေ။ ဆရာများမှ ဘာသာပြန်​အ​တွေ့အကြုံများကိုမျှ​ဝေခြင်​းသာမက ဘာသာပြန်​ဝန်​းကျင်​အသီးသီးအတွက်​ ဗဟုသုတ များကိုပါ သင်ယူရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒါ့အပြင်​ ပွဲတက်​​ရောက်​သူများအ​နေနဲ့ Peak Point Translation Hub မှာ အခမဲ့အသင်းဝင်​ခွင်​့ရပြီး Peak Point Academy နှင်​့ချိတ်​ဆက်​ထား​သော ​အေဂျင်​စီ​များနှင်​့ပါ Part Time /Full Time ဘာသာပြန် အလုပ်​အကိုင်​ အခွင်​့အလမ်​းများ ရရှိမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ လူဦး​ရေ ၃၀ ပဲ ကန်​့သတ်​ထားတဲ​့အတွက်​ အခုပဲ စာရင်​းသွင်​းလိုက်​ပါ။ တစ်ဦးလျှင် (၄၀,ဝ၀ဝ) ကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပြီး ဇွန်​လ ၃၀ရက်​​နေ့ မတိုင်​ခင်​ စာရင်​း​ပေးသွင်​းပါက 25% Promotion ရရှိမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ Date - July 7th & 8th Day - Saturday & Sunday Time - 2:00 - 6:00 PM Price - 40,000 MMK 25 % Promotion before June…